Air ကိုရန်ရေအပူ Pump, Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump, Air ကိုရေအပူ Pump ရေအပူပေးစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Other Markets , West Europe ထုတ်ကုန်:91% - 100% Cert:ISO9001, CB, CCC, CE, EMC, SSA ဖေါ်ပြချက်:ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း,Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump,Air ကိုရေအပူ Pump ရေအပူပေးစက်,အသေးစား Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက် > ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း
ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း, Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Air ကိုရေအပူ Pump ရေအပူပေးစက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အားလုံးတစ်ခုမှာ Air Source အရင်းအမြစ်အပူ pump ကိုစက်မှု
Water Heat Pump သို့အရည်အသွေးမြင့် 13kw Air ဖြစ်သည်
3kw စွမ်းအင်အသစ် Pump အမြင့် COP
200L Buffer Tank ပါသောအပူပေးစက်လေအရင်းအမြစ်
60c ရေထွက်ပေါက်နှင့်အတူအပူ pump pump လေကြောင်းလိုင်း
စီးပွားဖြစ် 38kw Air ကိုရေအပူ Pump အပူပေးစက်
မြင့်မားသော COP အပူ pump ကိုလေမှ
စမတ် Air ကိုအရင်းအမြစ်ရေအပူပေးစက်
Mini Air ရင်းမြစ်အပူရေစုပ်ရေအပူပေးစက်
220V အပူ Pump Air ကိုရေ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ 25P, 380V / 3Ph / 50 ~ 60Hz နှင့်အတူရေအပူပေးစုပ်ယူနစ်များ။ ၂။ လေရေအပူစုပ်စက်ရေအပူပေးစက်တွင်စနစ်နှစ်မျိုးရှိပြီးတစ်ချိန်ကအမှားအယွင်းရှိနိုင်သည်။ ၃။ ရေပူအပူချိန်မှာ ၆၀ ဒီဂရီ၊ ရေအေးသည် ၁၀ ဒီဂရီရှိနိုင်သည်။ ၄။ အလိုအလျောက်အကာအကွယ်ပေးသည့်လေအေးပေးစက်အပူစုပ်စက်တစ်ချိန်ကအမှားအယွင်းရှိသည်။ ၅။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ လေမှရေအပူစုပ်စက်ကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရေးအတွက်ဒေါင်လိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ၂။ ရေပူအပူချိန်သည် ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုအများကြီး စသည်တို့ကိုကြမ်းပြင်အပူ, ary ရေနွေး t ကို Sani, စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်း, အောက်မှာလိုပဲ။ ၃။ စီးပွားဖြစ်လေအပူစုပ်စက်သည် Remote ON / OFF...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ အဓိကအားဖြင့်ရေအပူအတွက်အများဆုံးရေပူ သည် ၆၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိရောက်ရှိသည်။ optional ကို function ကိုအအေး။ အနည်းဆုံးရေအေးအပူချိန် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ၂။ WILO ပါ ၀ င ်သောရေစုပ်စက် နှင့်အတူ လေရေအပူအပူစုပ်စက်ရေအပူပေးစက် သည်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ ၃။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. ရေပူသတ်မှတ်ထားသော +25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ +60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။ လေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ဒါကြောင့်ရေပူ, ကြမ်းပြင်အပူနှင့်။ နှစ်ဘက်ဓါးလေလေအပူစုပ်စက်နှင့်အတူ 2. ဘေးထွက်ပန်ကာထည်။ ၃။ လေမှရေအပူစုပ်စက်သည် -7 ~ + 43 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒေသများအတွက်သင့်တော်သည်။ 4....
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ရရှိနိုင် 1. အဝေးမှဖွင့် / ပိတ် function ကို, လေအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက် ဖြစ်နိုင်တယ် စီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၂။ လေမှရေအပူစုပ်စက်သည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော Tube-in-shell heat exchanger ကိုအသုံးပြုသည်။ ရေအပူများအတွက်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်။ ၃။...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: အသိဉာဏ်ညှိနှိုင်းမှုအီလက်ထရောနစ်တိုးချဲ့အဆို့ရှင်နှင့်အတူ 1. လေမှရေအပူစုပ်စက် ။ ၂။ စီးပွားဖြစ်လေပူအပူစုပ်စက်ကို ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံ၊ ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်၊ အမှား၏အမှု၌ 3. အလိုအလျှောက်ကွပ်မျက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ timer နေရာချခြင်းအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် LCD ကြိုးထိန်းချုပ်သူ။ ၅ ။ ၆။ Air source အပူ pump pump...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ လေမှရေအပူစုပ်စက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ဒီဇိုင်း၊ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပါရှိပါသည်။ 2. စီမံကိန်း / Sani t ကို ary ရေနွေး / ကြမ်းပြင်အပူအောက်မှာ / ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၃။ လေအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်ရေအပူပေးစက်သည်အပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသည်။ 4. လေအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက် EEV...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: တည်ဆောက်မှုတွင် WILO အမည်ရှိရေစုပ်စက်နှင့်အဆင်ပြေသောဒီဇိုင်း။ ၂။ အဓိကအားဖြင့်အပူစုပ်စက်၏ရေအပူသည်။ အအေးပေးသည်။ လေထုပြွန်အတွက် ၃။ လေအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်၏ဘေးထွက်ပန်ကာဒီဇိုင်းသည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၄။ ဖိအားရှိသောရေတိုင်ကီနှင့် ဆက်သွယ်၍ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ Eco အပူစုပ်စက် - အစိမ်းရောင်ဓာတ်ငွေ့ R407c / R410a, အမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိ အဖြူအရောင်ကက်ဘိနက် (သံမဏိ optional ကို) ။ ၂.၃ ကီလိုမီတာရှိသောလေမှရေအပူပေးစက်၊ အမြင့်ဆုံး COP ၃.၆၁ အထိ၊ အများဆုံးရေပူ 60 ℃ ။ (၃) လေမှရေပူစုပ်စက်သည်ရေပူစက်ဖြင့်လေပူနိုင်သည် အအေး / လေဝင်လေထွက်။ 4....
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ လေပူအပူစုပ်စက်သည်ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်၊ အရောင်မျိုးစုံအတွက်သံချေးမပျောက်ခြင်း optional ကိုအထူးမှိုဒီဇိုင်း။ 2. အစိမ်းရောင်ဓာတ်ငွေ့ R407c / R410a, 3.0 kw, အမြင့် COP, အမြင့်ဆုံးရေပူ 60 ℃ ။ ၃။ လေအေးပေးစက်ပါသောသေးငယ်သည့်လေအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်၊ လေအေး / လေဝင်လေထွက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ 4....
တရုတ်နိုင်ငံ ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း,Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump,Air ကိုရေအပူ Pump ရေအပူပေးစက်,အသေးစား Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း,Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump,Air ကိုရေအပူ Pump ရေအပူပေးစက်,အသေးစား Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
Air ကိုရေအပူ Pump ရေအပူပေးစက်
အသေးစား Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump
ရေအပူစုပ် 25P Air လေကြောင်းလိုင်း
ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump Air ကိုရေအပူ Pump ရေအပူပေးစက် အသေးစား Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump ရေအပူစုပ် 25P Air လေကြောင်းလိုင်း
မူပိုင်ခွင့်© 2019 Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. All rights reserved ။ မှပံ့ပိုးသည်